रोजगारी | गृहपृष्ठ | Page 17
काठमाडौं । हामी सधैं केही न केही झूट बोलिरहेका हुन्छौं । चाहे त्यो सामाजिक जीवनमा होस् अथवा व्यावसायिक जीवनमा...
असार ९, काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी वर्ष ५ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने योजना सफल हुनेमा सांसदहरुले आशं...
काठमाडौं । तपाईं पक्कै पनि कुनै संस्था वा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ होला । तर, महीना बित्न पाएको छैन, तलब कहाँ ज...
काशीराम बजगाईं काठमाडौं ।मुलुकका ५५ जिल्लाका करीब १० लाख कृषक अलैंची खेतीमा संलग्न छन् । तीमध्ये अधिकांशको बुझ...
काठमाडौं । ठूलो भएपछि यस्तो व्यवसाय गर्छु, उस्तो काम गर्छु भन्ने सोचेर सानै उमेरमा रमाउनेहरू हामीले धेरै भेट्छ...
दोलखामा १ हजार १९२ युवालाई सरकारले रोजगारी दिने, कुन स्थानीय तहमा कतिले पाउने ?
जेठ ९, दोलखा । दोलखाका १ हजार १९२ जना बेरोजगारलाई सरकारले रोजगारी दिने भएको छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको प्रध...
तलब नबढेर हैरान हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं । जागीरमा पदोन्नति होस्, वर्षैपिच्छे तलब बढिरहोस् भन्ने चाहना हरेक मानिसमा हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि ह...
उधमी बन्दै भूकम्पपीडित महिला
पोखरा। गोरखाको बारपाक लापुबेंशीकी सरिता गुरुङलाई भूकम्पको पीडा अझै ताजै छ । भूकम्पले उनको घर मात्र नभएर पूरै बारपाक ध्वस्त बनाइदियो । तर, मनमा पीडा लिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन...	बिस्तृतमा
on: March 05, 2015